တရုတ်သတ္တုစက်ပစ္စည်းကာစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း - တရုတ် Ningbo Ke မင်စက်
လြှောကျလှာ Machinery အစိတ်အပိုင်းများ
Surface ကအဘိတ် Polish
စက်ပစ္စည်းစာနာထောက်ထားရေး +/- 0.02mm
လက်မှတ်ပေးခြင်း က ISO 9001: 2008
သည်းခံနေခြင်း + -0.005mm
ကာစ် Method ကို Thermal ဆွဲငင်အားကာစ်
မှုမြား Technical ဖိအားကာစ်
Surface ကကြမ်းတမ်း Ra1.6
မျက်နှာပြင်ကုသမှု shot ပေါက်ကွဲမှု
မူလ Ningbo Zhejiang တရုတ်
ထုတ်လုပ်မှု၏စျေးနှုန်းရုံရည်ညွှန်းအဘို့ဖြစ်၏, ကသင့်ရဲ့ပုံဆွဲမူတည်ပါသည်။ မဆိုစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပေးပို့မှသာလြှငျ ?? process နိုင်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့သည်စကားလုံးကျော်ကနေမိတ်ဆွေများကစုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ ?? မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျနော်တို့စျေးနှုန်း satisfing? သင်တစ်ဦးကိုငါပေးမည်။
Ningbo Yinzhou Ke မင်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်း Co. , Ltd, 1996 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, စီးပွားရေး၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးသဘောသဘာဝဖြစ်တယ် ?? 5000 စတုရန်းမီတာဖုံးလွှမ်း, Ningbo.We တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ချ. , အဓိကအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတုလုပ်တဲ့, ထိုစက်အစိတ်အပိုင်းကို ပူဇော်. , Yinzhou ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည် , တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေမှုကိုချေဖျက်။ အရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှမိတ်ဆွေများကရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် servece ပူဇော်လိမ့်မည်ဟုကတိပေးနိုင်ပါတယ်။
ကာဗွန်သံမဏိနှင့်အနိမ့်အလွိုင်းသံမဏိအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖယောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Cast နှင့်ချောထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Ningbo Yinzhou Ke မင်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် Ltd.specializing, တရုတ်ရေဖန်ခွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Cast တစ်ဦးပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 10000 ကျော်တန်ချိန်အနေနဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူတိ Cast နှင့်ချောထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable ထားတဲ့2အဓိကအဆောက်အဦ, သံမဏိ ချ. foundry နှင့် CNC စက်စက်ရုံနှစ်ခုလုံးပါဝင်သည်, နှင့်ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်ဥရောပ, အမေရိက, ဂျပန်နှင့်အခြားသောတင်ပို့နေကြသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် Destinations ။
ယခင်: တရုတ်အကောက်ခွန် Precision လျှပ်စစ်အဘို့အစိတျအပိုငျး Casting
နောက်တစ်ခု: CNC စက်များဖြင့် Casting OEM သဲ Casting / သံကာစ် / သံမဏိကာစ် / လူမီနီယမ်
Cast သုံးရန် Foundry
စိတ်တိုင်းကျ Forge ရဲ့အပိုင်း
စိတ်တိုင်းကျ Precision ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Casting
တရုတ် မှစ. Foundry
အမြင့် Precision ဝက်အူအပိုင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Casting ကုမ္ပဏီများ
Mills Machinery အပိုင်း
အစိတ်အပိုင်းများ Casting OEM
Shell က Casting
silica ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Casting
OEM ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု / Precision သံမဏိ Castin ...
Precision အစိတ်အပိုင်းများ Pneumatic Cylinder စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ
OEM Vehical ပျောက်ဆုံးသွားသောဖယောင်းရုပ်များကအပိုင်းကုန်ပစ္စည်း Casting
OEM သတ္တု Precision သံမဏိအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Casting